ကျောက်စိမ်းကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်နိုင်မလဲ။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ကျောက်စိမ်းကိုဘယ်လိုဖြတ်တောက်နိုင်မလဲ။
views:101 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-03-06 မူလ:ဆိုက်ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ0တွင်လူများစွာသည်ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်jအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက် Ewelry နှင့် Jades တို့ကြောင့်ဤထုတ်ကုန်များသည်စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်များသည်။ လှပသောကျောက်တတိုင်များသည်သဘာဝကျသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။အရာများသောအားဖြင့်အချို့သောစက်များအားဖြင့်ကြီးမားသောကြမ်းတမ်းသောကျောက်ခဲများဖြင့်ဖြတ်တောက်သည်စိန်ကြိတ်စက်, ကျောက်စိမ်းကြိတ်စက်,ပင်သေးငယ်တဲ့ကြိတ် tool ကိုစသည်တို့မူကားကျောက်စိမ်းကိုကျပန်း ဖြတ်. ကြိတ်။ မရပါကျောက်စိမ်းကျောက်စောင်ကြိတ်စက်ဖြတ်တောက်ဖို့ဘယ်လိုအလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်,MINI Stone Grinderသို့မဟုတ်လက်စွဲစာအုပ်လက်မောင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ကာလအတွင်းအသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကျောက်စိမ်းကိုမည်သို့ဖြတ်တောက်ရမည်နည်း။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမည်။ သင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု. ၎င်းကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်တူးဖော်ခြင်းမှဖြတ်တောက်ခြင်းအထိ,ပြုပြင်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် polishing တွင်ခြေလှမ်းတိုင်းသည်အန္တရာယ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိလျှင်၎င်းသည်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများမှအချောပစ်ပြီးသောပစ္စည်းများအထိရုပ်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ဒီဇိုင်း, ကြမ်းတမ်းသောထွင်းထုခြင်း, ကောင်းမွန်သောထွင်းထုခြင်းနှင့်အရောင်ခြယ်သည်။ သူတို့တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်လှမ်းကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးများနှင့်စျေးကွက်တွင်ဘုံဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်စာရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ နည်းလမ်းတစ်ခုစီ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကားအဘယ်နည်း။ ငါတို့ကိုအတူတကွသိအောင်လုပ်ကြပါစို့။
Emery Wire ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ပြုပြင်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရရှိရန်အတွက်သဲဝါယာကြိုးနှင့်အလုပ်ခွင်ကိုဖြတ်တောက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ရိုးရာ Saw Blade နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုန်ကြမ်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၏အသုံးချမှုနှုန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပစ္စည်းများကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ချောချောမွေ့မွေ့နှင့်ချော့မော့ခြင်းဖြစ်ပြီးဖြတ်တောက်ခြင်းချုပ်ရိုးသည်မီလီမာနိုင်ငံအဆင့်အထိဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အဖိုးတန်ပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ရန်သင့်လျော်သောမြင့်မားသောကျဉ်းမြောင်းသောချုပ်ရိုးများကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်နိမ့်ကျပြီးအပိုင်းအစတွေကိုဖြတ်နိုင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည် output ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ကိုတိုစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများအတွက်စျေးနှုန်းကိုဂရမ်ဖြင့်တွက်ချက်သည်။ ပစ္စည်းများသိမ်းဆည်းရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်း၏အသုံးပြုမှုသည်ကျောက်စိမ်းကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသည်ကိုသဘောပေါက်သည်။
စျေးကွက်ပေါ်ရှိအသုံးအများဆုံးကျောက်စိမ်းဖြတ်တောက်ခြင်းများသည်ရေခုတ်ခြင်းနှင့်ဆီဖြတ်တောက်ခြင်းများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့မြင့်မားသောဖြတ်တောက်ခြင်းထိရောက်မှုနှင့်နိမ့်စက်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင့်သူတို့ကအချပ်များကဖြတ်နေကြသည်။ များသောအားဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောကျောက်တုံးသည်ဖြတ်စက်ကို ဖြတ်. စက်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ထားပြီးစက်အားဖြင့်ညှပ်ထားသည့်အချိန်တွင်,လက်ကိုင်ကျောက်ကြောင်ကြောင်းသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ကြိတ်ကိရိယာကိရိယာ။ဤနည်းလမ်းသည်အလွန်ပါးလွှာသောကျောက်စိမ်းကိုဖြတ်တောက်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမျက်နှာပြင်၏ရင်ပြင်ကိုအာမခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သတိမရှိခြင်းသည်လက်ချောင်းများဖြတ်တောက်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်လုပ်သားတွေကဒီဖြတ်တောက်ခြင်းကိုသုံးဖို့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ပါဝါကြိတ်ကိရိယာများသို့မဟုတ်လက်စွဲကြိတ်စက်များ။
ကျောက်စိမ်းကျောက်ကြိတ်စစ်ဆေးခြင်း Dremel Jade Stone Wrinder MINI Stone Grinder Dremel Mini Stone Grinder လက်စွဲစာအုပ်လက်ကြေးထိုးကျောက် စိန်ကြိတ်စက် ကျောက်စိမ်းကြိတ်စက် လက်ကိုင်ကျောက်ကြိတ်ရန်ကိရိယာ Dremel လက်ကိုင်ကျောက်တုံးကြိတ်ရန်ကိရိယာ လျှပ်စစ်ကြိတ်ကိရိယာကိရိယာ